Momba anay - Xuzhou Cui Can Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Cui Can Glass Products Co., Ltd. dia hita ao amin'ny tanànan'i Xuzhou ao amin'ny faritanin'i Jiangsu, manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, famolavolana, famokarana ary fivarotana vokatra fitaratra isan-karazany, toy ny tavoahangy fitaratra kosmetika, tavoahangy fitaratra manitra, tavoahangy divay, tavoahangy champagne. , tavoahangy zava-pisotro sy zava-pisotro misy alikaola, tavoahangy famonosana sakafo, tavoahangy fanafody ary vokatra hafa mifandraika amin'izany.
Ny orinasanay, mandrakotra velaran-tany 20.000 metatra toradroa, dia mitondra fitaovana avo lenta ary mampiasa ny tsipika famokarana mandeha ho azy efa mandroso indrindra.Ankehitriny, manana tsipika famokarana 10 izahay amin'ny fanaovana tavoahangy fitaratra.Misy atrikasa famokarana 10 sy andalana fivoriambe 30 ao amin'ny orinasanay.Ny vokatray isan-taona dia mahatratra 300 tapitrisa (150.000 taonina) ary manolotra sary hosodoko vita amin'ny vera matihanina, fanontam-pirinty, hot stamping, polishing ary serivisy hafa.
Noho ny akora tena tsara, ny asa tsara, ny endrika tsy manam-paharoa sy ny lamaody, ny kalitao avo lenta sy ny bika aman'endriny, dia nahazo fandresena an-trano maro izahay.
ary mpanjifa any ivelany.Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny mpanjifa ary tena malaza any Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana ary Eoropa.
Mino mafy izahay fa ny orinasa dia mifototra amin'ny kalitao tsara, hery matanjaka, serivisy tsara ary teknolojia siantifika mandroso.Miarahaba antsika namana avy any an-trano sy any ivelany mba hitsidika Xuzhou Cui can Glass Products Co., Ltd. ary hifampiraharaha aminay.Andao hiaraka hamorona rahampitso mamirapiratra.
Manana traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 20 taona izahay.Ny kalitaon'ny famokarana dia avo.Manana traikefa famokarana matihanina manankarena, hery ara-teknika matanjaka ary fitaovana famokarana mandroso.
“Ny kalitao ambony, ny vidiny mirary ary ny serivisy aorian'ny varotra” no fitsipikay, “Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa” no tanjonay mandrakizay;Ny vokatray dia fantatra fatratra amin'ny tsena maro ao an-trano sy manerana izao tontolo izao.
Manana laza tsara izahay amin'ny fanomezana asa tanana sy serivisy kalitao.Mandritra izany fotoana izany, mbola mitazona ny vidiny amin'ny ambaratonga izay mifaninana amin'ny mpividy izahay mba hananany fahafahana sy tombony bebe kokoa amin'ny tsena.
Fampisehoana ny fizotran'ny dingana
Afangaro ny akora, afangaro ny akora rehetra ao anaty mixeur
Mitsonika (1650 c): Afanaina amin'ny mari-pana ambony ny akora miaraka amin'ny fifanandrinana tsara mba hamorona ranon-javatra tsy misy bubble tsy misy bubble
Miforona (600 c): Tetehina ho lasitra ny vera anidina
Tsofy tavoahangy: vokatra mivaingana miendrika
Fanafody: Alefaso any amin'ny milina fanaovana anneau ny tavoahangy vera miendrika asiana (ny maripana azon'ny tanan'olombelona atao).
Farany, azo amboarina ny vokatra rehefa avy nandalo ny fisafoana
Fanontam-pirinty, Frost, Voninkazo natono, Spray, Plating, sokitra, fanapahana, matte,
Tavoahangy vera, Tavoahangy divay, Tavoahangy ranom-boankazo, Tavoahangy menaka tena ilaina, Tavoahangin-dranomanitra, tavoahangy Aroma, Ireo vokatra ireo dia azo averina araka izay ilaina.
1-Santionany maimaim-poana --- afaka manome tavoahangy maimaim-poana izahay ho an'ny fitsapana
2-Ny sarany santionany dia haverina aorian'ny fandraisana
3-Loge set --- Afaka manonta marika sy marika eo amin'ny tavoahangy isika araka ny takian'ny mpanjifa
4-Ny fonosana dia azo namboarina araka ny filana
5-Sarom-bilany mifanandrify azo
6-Fitsapana mpanjifa --- Miantoka ny vokatra amin'ny kalitao avo lenta sy tsara.
7-Hanome ny serivisy tsara indrindra izahay mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay.
8-Azontsika atao ny manamboatra fonosana isan-karazany ho an'ny mpanjifa amin'ny sehatra samihafa, manohana vahaolana tokana ho an'ny fonosanao
siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy vera labiera, tavoahangy diffuser volotara,